izinto Seven omkhulu on smartphone yakho - Izindaba Rule
izinto Seven omkhulu on smartphone yakho
Akungabazeki ukuthi ubuchwepheshe mobile ifikile ibanga elide kakhulu kuleminyaka edlulile, kanye nentuthuko ezenziwe lapho kuziwa Music ziye kwasenza sakwazi ukujabulela ezihlukahlukene enkulu imisebenzi kanye nezinzuzo uma usebenzisa lezi amadivayisi.
Nakuba Mobiles zethu zazisetshenziswa nje phonecalls kanye imiyalezo, manje singenza ezihlukahlukene enkulu imisebenzi esukela ukudlala imidlalo inthanethi ukuze ukuthatha izithombe ngisho nokwamukela oda izwi kusuka kudivayisi yethu mobile. Nazi eziyisikhombisa emisha mobile emhlabathini-breaking kakhulu.
l izingosi zokuxhumana: Smartphones zanamuhla yilezi ephelele zokuxhumana nabangani bakho nomndeni nge kumasayithi afana ne-Facebook ne-Twitter, phakathi kokunye. Iningi ukuvumela ukufinyelela lula kakhulu e-touch kwesikrini ukuze ukwazi ukuxhumana nabanye, ulayishe izithombe, Imininingwane yabelana, Ukubuyekeza izinga lakho nokunye okuningi nge kokuhlupheka sakugcina. Futhi labo nokuthanda zonke izinto nostalgic, ke Timehop uhlelo lokusebenza ngisho kudala ingobo yomlando digital zokuphila kwakho.
l Thatha izithombe: Amakhamera Smartphones zithinta imbulunga eyinkimbinkimbi eminyakeni, futhi lokhu kusho ukuthi manje ungakwazi ukusebenzisa ifoni yakho ukuthatha high quality izithombe ngenkathi wena futhi cishe ngaphandle kwesidingo ikhamera noma amanye amathuluzi digital. futhi lokusebenza Snapseed ye-Google, ungakwazi ukufinyelela ezingeni cishe professional amathuluzi wokuhlela izithombe, zonke kusuka kube lula smartphone yakho.
l Jabulela ukuzijabulisa: manje abantu abaningi basebenzisa Smartphones zabo ukujabulela anhlobonhlobo ukuzijabulisa ngenkathi they sendleleni noma ngisho nalapho ekhaya. Lokhu kuhlanganisa ukuzijabulisa ezifana ukubukela amabhayisikobho kusakazwe nge ibanga Uchwepheshe ukusakaza amasayithi, ukulalela izigidi zeziteshi zomsakazo inthanethi ngohlelo lokusebenza Streema, noma ukubuka amavidiyo we-YouTube, phakathi kokunye,.
l Ukudlala imidlalo: Uma une-smartphone, une siqu siqu mobile kudivayisi yakho amageyimu. Ungalanda mnandi futhi kucacile imidlalo mobile ezifana Kumelwe ukwakha isikebhe kudivayisi yakho njengoba indlela livening up esendleleni ekuseni. Futhi ungakwazi futhi ukudlala imidlalo efana Slots inthanethi futhi itafula imidlalo ezindaweni ezifana Springbok Casino, lapho ungakwazi ukujabulela yingcebo amageyimu ukuzijabulisa ezihlukahlukene virtual semidlalo yasekhasino konke lokhu kusukela entendeni yesandla sakho.
l Phezu Internet: smartphone yakho yenza kube lula kakhulu ku-intanethi futhi igagasi internet noma kunini uma ufuna, ngakho kungakhathaliseki lapho ukhona, ungakwazi ukujabulela ukukwazi ukufinyelela kuwebhu emhlabeni wonke. Nge amawebhusayithi abaningi ngokwengeziwe aguqulelwe kumadivayisi eselula ungase futhi ujabulele izinga okusezingeni surfing isipiliyoni uma usebenzisa mobile yakho ukuze uthole inthanethi.
l Lunga: Uma ufuna usizo oluncane lapho kuziwa enqubekeleni beyimiqemane nokuthola kufanelekile, ungathola usizo oludingayo ngosizo smartphone yakho. Ungalanda uhla ngempilo nobungqabavu zokusebenza ezokwenza wenze yonke into kusuka ukuhlinzeka ngolwazi lwethu lokudla okunempilo on ezahlukene zokudla, yokuzisiza wena nge zokuqapha kanye kokulandela amathuluzi. Esinye isibonelo mkhulu NexTrack uhlelo lokusebenza ukuthi akuyona kuphela khulula, kodwa futhi ilawula ukwenza umsebenzi fun!
l Sebenzisa it njengoba umsizi: Kuye ngalo smartphone unayo, ungasebenzisa umsizi kudivayisi yakho ukuze usize ukuhlela impilo yakho futhi uhlale unolwazi. Lokhu kufaka phakathi ukusebenzisa abasizi digital ezifana Siri kusukela Apple noma Cortana, umsizi digital-Windows 10.
Nge imisebenzi eziningi kangaka ezihlukene ayatholakala, akumangalisi ukuthi amaselula lanamuhla senibe njengabadinga ingxenye ebalulekile ezimpilweni zethu.
← Ukuphayona ukwelashwa komdlavuza onjiniyela omzimba alwa nezifo Mark Zuckerberg ukhuluma ekusekeleni amaSulumane nesonto ka 'zonda' →